“Obsi cunqurfamootaa roorroo cunqirsitootaa gabbisa!!”
Date: March 27, 2014Author: Oromedia 0 Comments
By Bariisaa web31
Sagantaa motumman Itopphiyaa Oromoon lafa isaa irraa buqqisuuf qopheefate iggituuf, Oromoon “diinni kana na godhe; sana na godhe” jedhee ofii gadduu dhiisee, yoomiyyuu caalaa of irraa loluu jalqabuu qaba; of irraa loluu hanqachuun, diinni sodaa tokko malee tufiin cunqursa isaa akka itti fufu ghodha. Haalli har’a Finfinne keessatti ta’aa jiru isa kana. Biyya lafaatti ykn addunyaatti iyyachuun, kanneen nu saamuu fi nu salphiisuu nurraa dhowwuu hin danda’au. Caalaa nu salphisa malee! Akka jedhamutti, seera uumaa keessaa inni duraa of dandamachiisuu (“self-preservation”) dha. Dhiitama mirga keenyaa kana iggituuf of aarsa (sacrifice) feesisu kafaluu, ykn afaan keenya qabatnee akka sabaa lafa irraa haxaawamnee baduu dha.
“… Warri bilisummaaf dhabbatnna jedhan, garuu sochii sabaa irraa fagaatani ta’ani ilaalan, akka nama osoo qotee hin facaasin midhaan haammachuu fedhuu ti. Isaan kun, warra bokkaa bakakkaa fi balaqqeessa hin qabne hawwan. … Qabsoon sabaa qabsoo sammuu ta’uu danda’a; ykn qabsoo irree ta’uu danda’a; ha ta’u malee qabsaa’uu feesisa. Warri aangoo qaban mirga tokkollee qabsoo malee kennnani hin beekkani.Kennuufillee hin deemani. Saba cunqursaa ofra hinfacifnee yoomiyyu cunqurfamni ittuma fe’ama. “
Akkuma hedduun keessan beektani, hawaasin warra Amaara Manz jalqaba jaarraa 18ffaa tti babal’achuu jalqabee, bara Sahle Sellassie, jechuun akaakayyu Menelik mootummaa dhaabbate. Sahle Sillaseen Motomaa Manzee ykn Shawaa dha bara 1813 amma 1847tti waggaa 34 bitee. Waggaa-waggaatti si’a lama ykn sadii Oromoota ollaa isaa turan weeraraa kan ture Sahle Sellaaseen, akkuma bare, bara 1843 keessa Finfinne weerare.
“Loon dhibbaan lakkawwaman marga lalise dheeda jiru. Tikeen saanii, balaa itti dhufaa jiru hin beekne; hidhatani hin baane; nagaan loonsaani tiksata jiru; inni kaani maasi-isaa keessaa hoji-isaa hojjetataa jira; maatiin isaanii weeddisaa mana bira dalagatu; aduu dhihuuf deemti, laafaf mukni ifaa shee gammaachuu guddaan waan calaqsani fakkaata. Garuu osoo aduun hin seenin, badii guddaan biyya kanairra dirriisuuf, warri akka bineesaa nama nyaatani kumaataman itti dhangala’a jiru.”
“Warranni Amaaraa, otoo Oromoon hinbekini akka galaanaa mandaroota Oromoo irra dhangala’e. Oromoota lubbusaanii baasuuf baqatan ari’aa, midhaan ga’ee ala jiru barbadeessaa, loon ala dheedaa jiru ooffachaa biyyaa Oromoo balleessuu eegalan. Ibiddi isaan mana fi qabeenya naannoo weeraran kanatti qabsiisanii fagoo dhaa mul’ata. Aarri manaaf midhaan gubatu gama-gamatti lafaaf waaqa dukaneessa jira.” Akkasittii biyaa baleessaa, waraanni Amaraa gara Finfinne dhangala’e” jedha Harris.
Kanatti fufee Harris akkana jedhee kataba:
Waraaan Amaraa Finfinnee … kan qonnaa midhaanitiin miidhagdee, mandaroota ho’oo kan qabdu, uumaan kan bareedina badhaasetti bahan. Dirree magarsuunshe nama dinqisiisu, burqaaleen bishaanshee calaqqisan, mukoota gaaddisa kennaniin kan guutte, yeroo dheeraaf warra Habashaan hin weeraramin turte.”
Egaa warri Finfinnee, dinni nutti dhufa jedhani hin yaadne ture jechuu dha.
Harris dabale waa’ee kanaa akkana jedha:
“Sabin lafa sana qubate jiru, qabbenyasaa gatee lubbusaa baasuuf Inxooxxootti baqachuufilee yeroo hin argatne. … Waraana Amaaraa bosona hunda keessa baqattoota adamsaa, ijoollee fi dubartoota bakka dhokatanii harkisanii qabaa, manguddoo fi dargaggoo osoo hin jedhin, dirree fi bosona keessatti ajjeesaa, qaama-isaanii irraa muratani; biyya erga samanii booda ibidda itti qabsiisani. … Horii hunda walitti qabanii ooffatan. Oromota marsanii waraanan. Qe’ee fi bakken reeffa Oromoon guutame. Kannen baqatanii dirreetti bahan akka bineensaa adamfmanii ajjeefamani; ijoollee umuriin baraa sadi’i fi afurii, kan aayyoo fi aabboon damee muka keessa dhoksan, muka irraa buusani akka oolaa qalanini, ykn achumatti rasaasan ajjeesanini. Sa’ati lama keessatti waraanni Amaraa kun lagaa fi dirree Finfinne irra reeffa Oromoo hafee, shamarran fi ijoollee qaamin irraa murame iyyisiisaa, “faacha” reeffarraa murate qabatee Finfine keessaa bahe.”
Harris yeroo ittuma fufee katabu akana ibsa, “… Sirni warra Habashaa, ummata itti duulan dagachiisanii wareersuu, ajjeessuu fi qaluu irratti hundaa’e. Sirna waraanaa irratti waan hundeefame miti”… Erga Finfinne saamee barbadeessee booda, waraanni Sahle Sellaasee Oromoo Yakkaa samuutti dabre.
Garuu Oromoni Yakkaa dinni akka itti dhuula jiru hinbekne ture.
Wa’ee Finfinnen Menelikiin qabamuu, Oromoo tokko ‘Inxooxxoo dhaabatani’ jedhee kan aarii isaa geerarsaan dhageessise dhaloota dhalootatti darbee jira.
Geerarsisaa akkas jedha:
Geerarsi kun dhaamsa hedduu of keessaa qaba. Namuu akak hubatutti, seerri Gadaa iddoo buqa’uun, qabeenyi Oromoo samamuu fi ilmaan Oromoo birmadumma dhabuun dhufaatii alagaa waliin walitti hidta. Kun immoo akka dnsaatti geerrarsa kanaan ibsamee jira.
3) Finfinnen waltajjii jarmyoota Oromoo hundaati. Afaanii fi aadan Oromoo dhiibbaa malee Finfinnetti dagaagu qaba. Oromoon miliyoona walakkaa ta’an Finfinne otoo jiraatanii afaan saanii akka fedhanitti dhima itti ba’u dadhabuun saanii wanjala guddaa dha. Aadaa fi eenyumaa Oromoo Finfinnetti ni dagaagaa.
Finfinnen handhura Oromiyaati!
Previous Previous post: OSGAn Sagantaa Madda Galii Milkaa’e Gaggeesse.
Next Next post: የነገሮ ዋቅጅራ ታሪክ በጎጃም (1864-1917)